Mpanamboatra sy mpamatsy Hydrocyclone | Mets
Ny hydrocyclone dia fitaovana fisarahana mahazatra sy naoty matetika, fitsipika fampiasa sedimentation sentrifugal matetika ampiasaina. Rehefa misaraka ilay slurry dia voatery manao fihetsika mihodina izy aorian'ny fidirana amin'ny cyclone manodidina ny cyclone. Noho ny herin'ny centrifugal sy ny bujanancy centripetal ary ny herin'ny dragona, ny haben'ny poti-coarse matevina ao anaty slurry mba handresena ny fanoherana hydraulic amin'ny hetsiky ny rindrina, ary eo ambanin'ny hetsika iraisan'ny hery misintona azy, miaraka amin'ny hetsiky ny fidinan'ny rindrina. , ny sombintsombiny tsara sy kely ary ny ankamaroan'ny rano noho ny hery afovoany dia kely, tsy mifanakaiky amin'ny rindrina miaraka amin'ny slurry ho an'ny fihodinana. Amin'ny famahanana manaraka, ny haben'ny sombin-javatra dia mihamitombo hatrany afovoany mankany amin'ny rindrina, mamorona fandaminana miloko. Rehefa mikorisa mankany amin'ny vatan'ny vertebra ny slurry avy amin'ny faritra misy vatan'ny siklone, dia kely kokoa hatrany ny fizarana miampita mikoriana, ao anaty fihenan'ny tsindry hazo lena avy any ivelany, misy sombintsombiny bitika kely ao anaty slurry anatiny izay tsy maintsy manova ny lalana, mihetsika ny hetsika miakatra, miforona hydrocyclone, ny fivoahan'ny fantson-drano mihoatra ny onja, nanjary tondraka; Na izany aza, ny poti-javatra lehibe dia mitohy mihodina mankany amin'ny rindrin'ny rindrina, mamorona ny tadin-tseranana ivelany, izay esorin'ny fikorianan'ny farany ambany ary lasa fasika mipetraka. Ka tratra ny tanjon'ny fanasokajiana fisarahana.
Momba ny fametrahana
1. Alohan'ny hanombohana ny fitsapana dia alao antoka fa efa nifatotra daholo ireo teboka mampifandray ny tarika cyclone, esory ireo residues isan-karazany ao anaty fantsona sy trano bongo, mba tsy hivoaka sy hikatso aorian'ny fiara. Aza hadino ny manokatra ny valizy amin'ny asany.
2. Azo vohana tanteraka ny valizy (toy ny fihazakazahana mihazakazaka) na mihidy tanteraka (toy ny rivodoza miverina), fa tsy avela ho ao anaty fanjakana misokatra (izany hoe, tsy avela hidina ny valva fehezo ny fikorianany).
3. Raha azo atao dia mba andramo rano aloha ny fiara. Ny sakafon'ny siklone dia azo omena amin'ny paompy na tanky avo. Raha mifanandrify ny paompy sy ny fandalovan'ny sikilety dia mampiseho famakiana tsy tapaka ny refy fanerena. Mba hahazoana antoka fa tsy miovaova ny vakitenin'ny fandrefesana, raha misy ny fiovan'ny toetr'andro dia zahao ny antony. Ny fitaovana dia takiana mba hiasa amin'ny tsindry 0.3MPa.
4. Rehefa mandeha tsara eo ambanin'ny tsindry mahazatra ny fitaovana dia zahao ny habetsaky ny tsiranoka mivoaka ary makà fepetra fanarenana raha ilaina izany.
5. Zahao ny fanakanana ateraky ny fikorianan'ny cyclone. Ny fanakanana ny fidiran'ny rivodoza dia afaka mampihena ny fikorianan'ny fihoarana sy ny fasika milentika, ary ny fikatona ny rivodoza dia afaka mampihena ny fikorianan'ny fasika mipaka ary na ny mikoriana aza. Raha misy ny fanakanana dia akatona ny valizy amin'ny valizy ary esory ny sakana. Mba hisorohana ny fanakanana, dia azo ampiana amin'ny fisakafoanana ny dobo misy vondrona hydrocyclone hisorohana ny fitaovana marokoroko sy ny tranony (ohatra ny fako), amin'ny fotoana tokony hipetrahana ara-potoana hametrahana rano ao anaty pisinina, fandrao indray rehefa mitondra fiara ianao dia mitera-doza noho ny orana ary avo loatra ny fifantohana.
6. Rehefa voaporofo fa miasa tsara amin'ny fitsapana rano ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny famahanana ilay slurry.
Tube savaivony (mm): 100 na 150 na 250 na 300 na 500 na 600
Taper: 8 na 10 na 15 na 17 na 20
Ny savaivon'ny fantsona miserana (mm): 20-40 na 30-45 na 60-100 na 65-115 na 130-200 na 170-220
Ny savaivony milentika (mm): 8-18 na 8-22 na 16-45 na 20-50 na 35-100 na 75-120
Haben'ny famahanana fatratra (mm): 1 na 1,5 na 3 na 5 na 6 na 10 na 13
Granularity (micron): 20-100 na 30-100 na 40-100 na 50-150 na 74-200
Fahaiza-manao (m3 / h): 5-12 na 20-40 na 40-60 na 60-100 na 140-220 na 200-300
Teo aloha: Hydrocyclone
Manaraka: Ball Mill